पूर्वराजाको चेतावनीः 'परिवर्तनकारी शक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ'
२०७६ कार्त्तिक १२ गते १८:२२
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले टीकाको शुभसाइत अनुसार आफ्नी बहिनी शोभा राज्यलक्ष्मी शाहको हातबाट टीका ग्रहण गरे । बहिनीको हातबाट टीका ग्रहण गरेपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै परिवर्तनकारी शक्ति नै अब मुस्किलमा पर्नसक्ने चेतावनी दिए । उनले सर्वसाधारणलाई अनुभूति हुनेगरी विकास र प्रगतिका काम परिवर्तनकारी शक्तिले नगरे उनीहरुलाई जनताले मुस्किलमा पार्नेसक्ने संकेतगरे । उनले भने,'परिवर्त ... read more...
२०७६ कार्त्तिक १२ गते ०९:३९
काठमाडौं । कार्तिक शुक्ल द्धितीयको दिन अर्थात यम पञ्चकको पाँचौं दिनमा भाइटिका पर्व मनाइन्छ । देश-विदेश रहेका दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई भाइटीका लगाएर यो पर्व मनाईंदै छ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएर भगवानसँग दीर्घायुको कामना गर्छन् । यो पर्वलाई दुई वटा पाटोबाट महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यो हो-पौराणिक किंवदन्ती एवं ऐतिहासिक कथा । परापूर्व कालमा कात्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन मनाइन ... read more...
भीआइपी जुवाडेको तिहार अब हिरासतमै, प्रभुले पनि बचाउन सकेनन्
२०७६ कार्त्तिक ११ गते १८:३६
काठमाडौं । भीआइपी जुवाडेहरुको दीपावली प्रहरी हिरासतमै हुने भएको छ । आइतबार बिहान २ बजे राति पक्राउ परेका २५ जना भीआइपी जुवाडेहरुमध्ये ६ जनाले दीपावलीको शुभअवसरमा हिरासतम मुक्त हुने मनसायले आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै भोलीपल्टै अर्थात सोमबार उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । त्यसै अनुसार उनीहरुलाई महाराजगञ्ज बृत ... read more...
छिट्टै छुटन 'विग सट' वाला ६ जुवाडे सर्वोच्चको शरणमा
२०७६ कार्त्तिक ११ गते ११:५३
काठमाडौं । आइतबार २ करोड ७० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको २५ जनामध्ये ६ जना जुवाडेले हिरासतबाट छिट्टै छुट्न कानुनको सहारा लिएका छन् ।आइतबार बिहान २ बजे पक्राउ परेका उनीहरुले आइतबारै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई सोमबार उपस्थित गराउन महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जलाई आदेश गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जका प्रमुख डिएसपी ... read more...
अध्यक्ष यादवले अवैध काम गरेपछि राजपा र काँग्रेसले गर्यो तालाबन्दी
२०७६ कार्त्तिक १० गते १७:२७
सर्लाही । गैरकानुनी रुपमा सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेपछि गाउँपालिकाका सवै सरकारी बिद्यालयहरुमा राजपा नेपाल तथा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादवले गैरकानुनी रुपमा सुन्दरपुर नयाँबजार वडा नं. ४ मा रहेको श्रीजनता प्राथमिक बिद्यालयमा आफूनिकट प्रअ नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको हो । बिद्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ प्रअ ... read more...
लामोसाँघु विद्युत सव स्टेशनमा अचानक आगलागी
२०७६ कार्त्तिक १० गते १५:०८
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुस्थित रहेको विद्युत सव स्टेशनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । लामोसाँघु सव स्टेशनमा रहको १३२ केवीको ट्रान्सर्फमरमा आगो लागेको हो । उक्त आगलागी नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेना परिचालित भएका थिए । आगलागी के कति कारणले भयो र आगलागीबाट के कति क्षति भयो ? त्यसको विवरण आइनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । सवै ... read more...
दुई दर्जन ठूला जुवाडे अर्थात ‘विग सट’ वाला करोडौं रुपैयाँसहित समातिए
२०७६ कार्त्तिक १० गते १३:२८
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जले अहिलेसम्मकै सवैभन्दा ठूलो जुवोडेहरु अर्थात ‘विग सट’ वाला समूहलाई करोडौं रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेली नामुद गुण्डा, रक्तचन्दन तस्कर, बैंकर, घर-जग्गाको काम गर्ने नामुद दलाल, ठेक्कापट्टाको काम गर्ने ठेकेदारदेखि जुवा अखडाबाट पटक-पटक पक्राउ परेका पटकेहरु रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँ बरामद ग ... read more...
नेवाः समुदायको सम्मानमा कार्तिक १३ गने सार्वजनिक विदा
२०७६ कार्त्तिक ७ गते २०:०६
काठमाडौं । सरकारले नेवा: समुदायको कियापूजालाई मध्यनजर गर्दै सम्मान स्वरुप भाइटीकाको भोलीपल्ट अर्थात कात्तिक १३ गते पनि सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेवाः समुदायको किजापूजाका लागि कात्तिक १३ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेवाः समुदायले कियापूजाका लागि सार्वजनिक विदा दिन यसअघि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । ... read more...
बलात्कारपछि हत्या काण्डः ईन्टरपोलको सहयोगमा समातिए गौतम
२०७६ कार्त्तिक ७ गते १२:११
काठमाडौं । अपराधी कुनै न कुनै बेला फस्छ नै । त्यस्तै भएको छ बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा दुई दशकदेखि फरार रहेका अभियुक्त लीलाराज गौतमको हकमा पनि । गौतमलाई प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा अमेरिकाबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ । झापा चन्द्रगढी-३ का गौतम, मनोज खड्का र सीताराम बस्नेतले ०५७ साल असोज २९ गते स्थानिय सन्ध्या राजवंशीलाई जबर्जस्ती करणी गरेपछि घाँटी थिचेर हत्या गरे ... read more...
काठमाडौं । चाबहिलस्थित मूल सडकमा जोडिएको घर भत्काउने क्रममा पुरानो घर भत्किँदा घाइते एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का घाईते उपचारत रहेका छन् । बुधबार दिउँसो घर भत्किँदा घाइते भएका २६ वर्षीय दीपक तामाङको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशालाले जानकारी दिएको छ । उनको चाबहिलस्थित दिर्घायु अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । घर भत्काउने क्रममा एक्कासी घर ढलेपछि घाइते भएका रामबहादुर कुँवर घर भ ... read more...
आफ्नै बाबुको हत्या गर्ने 'रनकाजी' २० बर्षपछि समातिए
२०७६ कार्त्तिक ४ गते १८:४६
काठमाडौं । २० बर्षअघि आफ्नै बाबुलाई धारिलो हतियार घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरे रनबहादुर तामाङ उर्फ रनकाजीले । उनी २० बर्षसम्म अपराध लुकाउन आफ्नो नाम, ठेगाना र परिचय लुकाएर भौतारिए । सोही अपराधबाट बच्न वैदेशिक रोजगारीका लागि कुँवेत पनि पुगे । अन्नतः उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २० बर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ । साविक काभ्रे श्यामपाटी गाउँ विकास समिति वडा ... read more...
डिपोको ठगी धन्दा: निर्माण सामाग्री कम ढुवानी गर्ने २३ जना समातिए
२०७६ कार्त्तिक २ गते १०:४८
काठमाडौं । घटना देख्दा सामान्य तर कसैको आँखा नपुगेको ठगी अपराध । ठगी सानो देखिए पनि बर्ष दिनमा ठगी गरेको रकम जोड्दा एउटै डिपोले लाखौं करोडौं रुपैयाँ ठगेको पुष्टि हुन्छ । निर्माण सामाग्री कम ढुवानी गरेर ठगी गर्ने त्यस्ता डिपोका सञ्चालकमाथि पहिलो पटक महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अपरेशन गरेको छ । विभिन्न डिपोमार्फत निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दा कम परिणाम ढुवानी गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने दुई दर् ... read more...
सामान्य विवादमै घाँटी रेटेर हत्या, अभियुक्त खोज्दै प्रहरी
२०७६ कार्त्तिक १ गते ०८:५४
सिन्धुपाल्चोक । पाँपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका ५ गुन्सामा गएराति एक जना युवाको घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ । सामान्य विवादमै बर्ष २८ का विजय लामाको सोही गाउँपालिका बस्ने मिलन स्याङ्बो र बमबहादुर स्याङ्बोले हत्या गरेर फरार भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लामाको घाँटी रेटेर हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रवक्ता एवम् डिएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले पुष्टि गरे । प्रहरीले फरार अभियुक्तहर ... read more...
१४ बर्षीय बालकमाथि छुरा प्रहार गर्ने राजुराम समातिए
२०७६ असोज ३० गते १२:५५
पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले छुरा प्रहार गर्ने एक जना ब्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत विहार मुझफ्फरपुर थाना मतहा घर भई वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर-१५, प्रतिमा चौकस्थित तमाना टायर पसलमा कार्दै आएका राजकुमार भन्ने राजुराम रहेका छन् । उनले सोही पसलमा काम गर्ने १४ बर्षीय अभिसेक नाम गरेका बालकलाई बाँया छातिमा छुरा प्रहार गरेको थिए । पर्सा प्रहरीले घाइते अभिषेकको उपचारका लाग ... read more...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन ब्यूरो (सीआईबी) ले ठगी मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ठगी मुद्दाका प्रतिवादी दोलखा घर भई हाल काठमाडौं वडा नम्बर ६ बस्दै आएका पेम्बा दोर्जे शेर्पा रहेका छन् । ४० बर्षीय शेर्पालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले १ बर्ष कैद र नगद ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । पक्राउ परेका शेर्पालई ब्यूरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत मंगलबार डिल् ... read more...
काठमाडौं । एक जना दलितलाई रुकुमका जनप्रतिनिधिले अपमान गर्दै कुटेपछि उनले न्यायका लागि उजुरी गरे । तर ती जनप्रतिनिधिले उल्टै मार्ने धम्की दिएपछि उनी विस्तापित भएका छन् । विस्तापित भएका रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-३ का गोविन्द विक अहिले न्यायका लागि राजधानी आइपुगेका हुन् । विकलाई चौरजहारी नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाथोकीले जातीय गालीगलौज गर्दै पिटेको पीडित विकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानका ... read more...
अवैध हुण्डीका कारोबारी राय १० लाख रुपैयाँसहित समातिए
२०७६ असोज २९ गते १४:४३
मोरङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले एक जना अवैध हुण्डीको कारोबारीलाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनसरी बर्जु गाउँपालिका-३ का २४ बर्षीय उमाकान्त राय रहेका छन् । अवैध हुण्डीको कारोबारी रायलाई प्रहरीले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-४ को कन्चनबारी चोकबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनको साथबाट नगद १० लाख रुपैयाँ तथा प्राइम र एनसीसी बैंकको चेकबुकसमेत बरामद गरेको छ ... read more...
डिनलाई कालोमोसो दल्ने समातिए, जो डा. केसी विरुद्ध अनसन बसेका थिए
२०७६ असोज २८ गते २१:४४
काठमाडौं । कथित शैक्षिक अभियन्ता विजय थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र (डिन) कार्यालयका डिन डा. जगदिश अग्रवालमाथि कालोमोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कागेश्वरी मनहरा-१ बस्ने थापालाई महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जले मंगलबार (आज) पक्राउ गरेको हो । गत भाद्र २९ गते थापा र उनका केही साथीहरुले पत्रकार भएको झुटा परिचय दिँदै डिन अग्रवालको कोठामा छिरेर कालोमसो दलका थिए । महाराज ... read more...
काठमाडौं । हिन्दुहरुको अर्को महान पर्व दीपावली नजिकिँदै गर्दा घरघरमा मिनि क्यासिनो खुल्नेक्रम बढेको छ । नेपालको कानूनले जुवालाई अवैध मानेको छ तर दीपावली नजिकिँएसँगै अवैध जुवा सञ्चालक र जुवाडे जुर्मराएको प्रमाण ४८ घण्टा वित्न नपाउँदै लाखौं रुपैयाँसहित तीन दर्जन बढी जुवाडे पक्राउपर्नु हो । शनिबार मध्यराति महानगरीय प्रहरी बृत्त बौंद्धले २१ जना जुवाडे आरुबारीबाट पक्राउ गरी करिब १९ लाख रुपैयाँ बरा ... read more...
मेलम्ची । बडहरे बस दुर्घटनाका घाइते विभिन्न अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्कन थालेका छन् । शनिबारसम्म ८१ घाइते उपचारपछि घर फर्केका छन् । अझै २५ घाइते विभिन्न चार अस्पतालमा उपचाररत छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा अहिले उपचाररतमध्ये छ घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । प्रहरीका अनुसार काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ६६ मध्ये ५२ यात्रु घ ... read more...